Nezvedu - Wistron Industrial Limited
Kufungisisa Mugwagwa Stud
Aluminium Mugwagwa Stud
Girazi Road Stud
Plastic Mugwagwa Stud
SD-RS-SA1 Chikamu Aluinum Solar Road Stud
SD-RS-SA2 Yakapetwa Reflector Solar Road Stud
SD-RS-SA3 Hores Aluminium Solar akatungamira Road Stud
SD-RS-SA5 Solar Road Stud Pavement Chiratidzo
SD-RS-SA6 Anti-compress Resistant 30 Matani Solar Cat Maziso
SD-RS-SG2 Yakapusa Girazi LED Solar Road Stud
SD-RS-SG3 Solar Inowirirwa Pevement Road Stud
SD-RS-SG5 Yemukati Yakavhenekerwa Solar Pavement Yakavezwa
SD-RS-SP1 PC Round Solar Cat Maziso Emugwagwa Stud
SD-RS-SP2 Ultra-yakatetepa Solar akatungamira Cat maziso Road Road Stud
Yakawiriraniswa yezuva mugwagwa stud
Solar traffic Sign & Chiedza
Solar Traffic Chiedza
Kupeta Traffic Cone
Pe TraffIC Cone
PVC Traffic Cone
Mari yezvikamu Wistron Industrial Limited
Yakakwana kambani inosanganisa indasitiri nekutengeserana
Beijing Wistron Technology Ltd. rakaumbwa muna 2012. iri nzwisisika kambani kusanganisa maindasitiri uye kutengeserana. Iri izere bhizinesi rinotarisa kutsvagisa nekusimudzira, kugadzirwa uye kutengesa kweSolar simba mumugwagwa zvigadzirwa zvigadzirwa uye zvine hukama zvakajairika traffic michina. Parizvino, kambani ine zvigadzirwa zvechigadzirwa, ine yakakwana uye yesainzi ISO9001 yemhando manejimendi manejimendi, zvigadzirwa zvakapfuura CE, ROHS, FCC, IP68 uye zvimwe zvitupa, pamwe nekuenderana neEuropean neAmerican ASTM D4280 uye EN1463-1 zviyero. .
Chigadzirwa chehunyanzvi R & D timu
Iyo kambani ine inesimba uye yehunyanzvi chigadzirwa R & D timu, uye 40% yemubhadharo wepagore uchashandiswa kune tekinoroji R & D. Uye yakashongedzerwa ne debugging uye system kusangana kwehunyanzvi-isina guruva yekugadzira yemusangano 1000 mativi emamirimita. Iyo ine yakasimba uye yakakwana yakanaka manejimendi sisitimu muzvikamu, kugadzirwa uye mhando kutonga, iyo inopa yakavimbika vimbiso yekutakura kutenderera, kutonga kwehunhu uye yakakwira yekupasa chiyero.
Hunhu, kuvimbika, chengetedzo uye simba kuchengetedza Mutengi kutanga
Isu takanyatso kubatikana muindasitiri, chengetedza kupisa kweiyo indasitiri, uye tinamatire kune kutungamira kwe "mhando, kuvimbika, chengetedzo nesimba rekuchengetedza Mutengi kutanga". Namatira kuchirongwa chechigadzirwa R & D, kugadzira uye kutengesa. Kusvika ikozvino, zvigadzirwa zvakatumirwa kunze kwenyika kuSoutheast Asia, Europe neAmerica, Middle East neAustralia, Africa, South America nemamwe mazana enyika nenzvimbo.
Kutendeseka, Kuzvipira, Kufambisa, Kugadzira
Wistron inotakura mweya wemubatanidzwa weKuvimbika, Kuzvipira, Kuronga, Kugadziridza mupfungwa nguva dzese uye ichaedza kugutsa vatengi veSolar simba mugwagwa wevatengi uye kuhwina yakawanda migove yemusika pamwe nekuderedza kushandiswa kwesimba kwepasi mumazuva anotevera. Chinangwa chedu ndechekuvaka hukama hwakareba uye hwakawiriranwa hwehukama hwebhizinesi nevanhu pasirese, isu tichafarira kubatana kwako, tinokutendai zvikuru!
Room 801, Kuvaka A, Zhongguancun Innovation Base, No.369, Huiyang Street, Jingxiu District, Baoding City, Hebei Province
For kubvunza pamusoro zvinhu zvedu kana pricelist, ndapota siya kwatiri uye isu tichava nekuonana mumaawa makumi maviri nemana.